နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အံ့အားသင့်စရာ! ဒါဟာစျေးအသက်သာဆုံး | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ပုံစံအသစ်ပေါ်ထွက်လာသောစျေးကွက်များကြောင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည် လျှပ်စစ်မီးရဖို့စျေးနှုန်းချိုသာ။ နယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူအချို့၏အဆိုအရအဖြစ်မှန်အသစ်ကိုသိနိုင်သော်လည်းမကြာမီတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမှာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
ဒါဟာပြီးသားလူသိများခဲ့သည် တစ်ချိန်ချိန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ယခင်ကလေစွမ်းအင်ထက်၎င်းကိုထုတ်လုပ်ရန်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းအထူးသဖြင့်အထူးပြိုင်ဆိုင်မှုတင်ဒါများတွင်တက်ရောက်ခြင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယခုပြောင်းလဲမှုသည် ပို၍ အခြေခံကျသည်။ အကယ်၍ စက်ရုံအသစ်များကိုကြည့်ပါကသူတို့သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ကျောက်မီးသွေးကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။ အမှန်မှာ၊ မည်သည့်နေရာများပေါ်တွင် မူတည်၍ စျေးနှုန်းအလွန်သက်သာသည်။
ပြီးတော့အဲဒါကိုလေစွမ်းအင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စီမံကိန်း ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များတွင် ဆိုလိုသည် နိမ့်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ပေးသည့်အစီရင်ခံစာအရလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများကိုရည်ညွှန်းသည် ဘလွန်းဘာ့ဂ်စွမ်းအင်ဘဏ္Financeာရေး.
ယခင် OECD အပြင် (တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့်ဘရာဇီးအပါအ ၀ င်) ထွန်းသစ်စစီးပွားရေး ၅၈ ခု၏ယခင်ဇယားကိုကြည့်ပါက ကျနော်တို့ကြောင်းစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပျှမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် လေနှင့်နေစွမ်းအင်သည်တန်းတူဖြစ်သည်။ ဂရပ်၏နောက်တွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်စစ်ဆေးမှုအပြင် လေတိုက်အောက်သို့ကျရန်ရည်ရွယ်။ အဖြစ်မှန်တွင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မကြာမီပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
ချီလီသည်မှတ်မိရန်အရေးကြီးသည် စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရှေ့တန်းမှမှာ လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံဒေသများတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်။
ဤကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်စံချိန်တင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အရာတစ်နှစ်အတွက်နှစ်ဆသိရသည်- ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံမှ ၂၀၁၅ တွင်ဒေါ်လာ ၃.၂ ဘီလီယံသို့သွားသည် (နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကိုနှိပ်ပါ) ဒီမှာ)
ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများသည်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်စီးပွားရေးထက်သိသိသာသာကြီးထွားလာနေသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည် နောက်ဗီဒီယို ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများကြုံတွေ့နေရသောစွမ်းအင်တော်လှန်ရေးအကြောင်းပြောသောလက်တင်အမေရိကအတွက် Blooberg New Energy ၏ဒါရိုက်တာမှဖြစ်သည်။
ငါတို့ကြည့်ပါ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အတွက်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသည်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (OECD) ၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၃၅ နိုင်ငံကို ကျော်လွန်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၅၄.၁ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ပြီးထိုအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၃.၇ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တိုးတက်မှုနှုန်းသည်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များ၌ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် ခေါင်းဆောင်တွေကျန်နေပါစေ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အကန့်အသတ်မရှိ၊ အထူးသဖြင့်ယခုအခါနိုင်ငံပေါင်း ၇၅% သည်အသစ်တပ်ဆင်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ချမှတ်ထားသည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည် လာမည့်နှစ်များတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစီမံကိန်းများ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးပမာဏသည်နိုင်ငံ ၅၈ နိုင်ငံအနှံ့ကွဲပြားသည် ရာသီဥတု။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးနီးပါးသည်တရုတ်မှဖြစ်သည် ဘဏ်များနှင့်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းကလာ။ ကမ္ဘာ၏အခြားအဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းများနီးပါးရှိသောမက္ကဆီကို (သို့) ချီလီရှိသည် အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကငွေကြေးထောက်ပံ့.
ဘရာဇီးနှင့်တောင်အာဖရိကကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်လာသည် ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုတစ်စုမှ. ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုအသက်သာဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများ၏လက်ထဲမှရရှိလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအရှိန်တိုးတက်မှုနှင့်အဆင့်ဆင့်၏စိန်ခေါ်မှုများ စံချိန်တင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းအများအပြားခေါင်းကိုက်တတ်၏. အလျင်အမြန်ဆောက်လုပ်ရေးအရှိန်အဟုန်၊ ဤနိုင်ငံများရှိဓာတ်ပေါင်းဖိုအမျိုးမျိုး၏မတည်ငြိမ်မှုသဘောသဘာဝနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမျိုးဆက်သည်နည်းပညာနှင့်ဘဏ္challengesာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အံ့အားသင့်စရာပါ။ ဒီဟာစျေးအသက်သာဆုံး
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် compressed air သိုလှောင်ခြင်း